Maitiro Ekurambana muDubai | Mutemo Makambani Dubai
Maitiro Ekurambana muDubai
Islamic Sharia Mutemo weKurambana
Mutemo weIslam Sharia unotonga nyaya dzekurambana. Sharia misimboti inoita kuti zviomere ivo vaviri vakaparadzaniswa kuti vaparadzane, kunze kwekunge mutongi agutsikana zvizere kuti mubatanidzwa hausi kuzoshanda. Nhanho yekutanga mune yekurambana maitiro ndeyekuisa nyaya muFamily Guidance Chikamu uye neMitemo. Zvinyorwa izvi zvichakurumidza kuendeswa kudare kana vaviri ava, kana mumwe wavo achisimbirira kurambana. Vasiri-maMuslim vangangoda kuti mitemo yenyika dzavo dzekumba ishandiswe mune zvavo zviitiko.
Vanodaidzira vanogona kunyorera Divorce
Vasiri-maMuslim pamwe nevamwe vatorwa vanogona kunyorera kurambana muUAE kana mukati menyika yavo yekumba (domicile). Zvingave zvinopa mubayiro kubvunza gweta rine ruzivo rwekurambana, uyo anoedza kuyedza kugadzirisa gadziriso kumativi maviri aya.
Vaviri ava vachataura vavariro yavo yekuyedza kuputsa mubatanidzwa. Kurambana kwacho kuchazopihwa kana mutongi aona kuti zvinangwa zvinogutsa. Vamwe vanotenda kuti murume anongoda kukumbira katatu kuti arambane (Talaq) kurambana pamwe nemukadzi kwapera. Uku hakuna kumira zviri pamutemo uye chingori chiratidzo chekufananidzira. Kune rimwe divi, kurambana kunogona kupihwa nemutongi pazvikonzero izvi, asi kurambana kwacho hakusi pamutemo kunze kwekunge kupihwa nematare.
Mushure meTalaq, mudzimai, pasi peSharia Law, anofanira kutarisa Iddat. Iddat inoenderera 3 mwedzi. Nenzira iyi murume anotenderwa kusimbirira mukadzi wake kuti adzokere kubatanidzwa. Kana mushure memwedzi mitatu musikana achiri kuda kurambana, mubatanidzwa uchaputswa nemutongi. Iye murume anogona kukumbira maitiro eTalaq pazviitiko zvitatu zvakasiyana asi anogona kungoomerera kuti adzokere kaviri katatu.
Zvinotora nguva yakareba sei kuti Varambane?
Izvi kazhinji zvinowanzotemwa nekuomarara kwenyaya yacho asi inogona kunge iri mwedzi mitatu kusvika mitanhatu, dzimwe nguva yakawanda, zvine chekuita nenyaya yacho.
Nekuti mutemo weIslam Sharia unoronga nyaya dzekurambana, zvingave zvakaoma kune vakaroorana kuti vasiyane sezvo mutongi achifanira kuve nechokwadi chekuti mubatanidzwa hausi kuzoshanda.
Paunenge iwe waita sarudzo yekuendesa fomu rekurambana, simbisa kuti unokwanisa uye nepfungwa dzakanaka kuita sarudzo dzako dzega. Nyaya yacho inozoiswa muFamily Guidance Chikamu uye neMitemo muDare reDubai. Nguva pfupi yapfuura, chipangamazano anosangana nevaviri vasati vatanga nzira yekurambana, kuti vataure nezvezvinhu zvavo kuti vaone kana muine mukana wekuyananisa.
Muchiitiko vaviri vaviri vagari muAU uye vese maMuslim / Asiri maMuslim, mutemo weSharia / UAE ungangodaro uchashandiswa pakurambana kwavo.